Resultskwọ nsonaazụ azụmaahịa na imepụta ihe dị ka ntọala nke ahịa ọ bụla, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ere ahịa anaghị enweta oge zuru ezu iji mee nke ahụ. Usoro ihe ochie abaghịzi, sistemụ anaghị ekwurita okwu, ahịa na-agbanwe, anyị na-achọ usoro agile ọbụlagodi iji debe. N'ihi ya, anyị emefuola ọtụtụ n'ime mgbalị anyị karịa ka anyị bara n'ezie - creativity. Ihe okike nwere ike ịbụ ihe mgbochi kachasị sie ike iji robot dochie ya. Nke ahụ kwuru… ọrụ ndị anyị na-etinye oge anyị niile na ya nwere ike ịgbanwe karịa ka ị chere.
Ngwaọrụ igwe - site na iji ọtụtụ ihe agbakwunye data na-azụ data ahịa, data asọmpi, na data ndị ahịa, nkwa nke mmụta igwe bụ na sistemụ nwere ike ịkọwa, mezuo, na ọbụlagodi nyocha dị iche iche. Chee echiche oge ole ị ga - alaghachi mgbe ịnweghị ịhịa aka ma jụọ data ugboro ugboro.
Amamịghe echiche - ezie na iche iche nwere ike ịbụ iri afọ ole na ole, ọgụgụ isi bụ ọganihu na-akpali akpali na mpaghara ahịa. AI ka na-achọ ọnụọgụ data na-enweghị njedebe iji ruo ọkwa okike nke mmadụ taa, ya mere o doro anya na a ga-edochi onye njikwa n'oge ọ bụla.
A na-e mimomi ihe okike mmadụ n'ụzọ dị mfe, mana ọ ga-esiri ya ike ịmeghachi ya. Enweghị m obi ike dị ukwuu na m ga-ahụ robot ka ọ na - emepe dị ka mkpọsa okike dịka Leisurejobs mere na infographic a n’oge na - adịghị anya. Mana ekwenyesiri m ike na afọ ole na ole na ọ ga-enwe ike ịmụ ihe na ya ma copyomie ya!
A ga - eji rọbọt dochie 47% nke ndị ọrụ mmadụ site na 2035, gịnị ga-ekwe omume na a ga-anọchi gị?